stuffing နှင့်အတူဝက်သား၏လက်ချောင်းများ - 10 မှ3စင်တီမီတာ၏အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်. အသေးလိပ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့တစ်တွေအဓိကသင်တန်းအဖြစ်ကိုလည်းအစေခံအဖြစ်ပွဲလမ်းသဘင်စားပွဲပေါ်မှာများအတွက်အအေး starter နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးဟင်းလျာများမူရင်းတိကျစွာကင်အသား၏အရသာကိုအလေးပေးသော stuffing အတွက်တည်ရှိသည်။ ဝက်သားလက်ချောင်းများပြင်ဆင်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံကိုကြည့်ကြရအောင်။
ဝက်သား tenderloin - 600 ဂရမ်;
breadcrumbs နှင့် - 150 ဂရမ်;
သံလွင်သီး - 30 ဂရမ်,
လတ်ဆတ်သောမှိုများ - 100 ဂရမ်;
ဘေကွန် - 50 ဂရမ်,
ခြောက်သွေ့တဲ့မုန်ညင်း - အဖြစ်တော့။
ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏ရဲ့သင်တို့သည်ငါတို့၏အစားအစာများများအတွက်အခြေခံလုပ်ကြကုန်အံ့။ ဒီလြျှောအအေးပြေးရေဝက်သား tenderloin အောက်မှာနှင့်ဂရုတစိုက်စက္ကူပဝါနှင့်အတူကပြေသည်။ ထိုအခါခုတ်အဖြစ်, ပါးလွှာချပ်ထဲသို့အမဲသားကိုခုတ်ဖြတ်။ ဒီဝက်သားပြီးနောက်အပိုင်းပိုင်းခြောက်သွေ့တဲ့မုန်ညင်းပွတ်သပ်နှင့်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ 40 မိနစ်ခန့်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ထိုအခါဂရုတစိုက်အနည်းငယ် prisalivaem နှင့်ငရုတ်ကောင်းကထိပုတ်ပါ။ အခုတော့ stuffing တိုက်ရိုက်သွားပါ။ သေးငယ်တဲ့အပိုင်းပိုင်းသို့ဘေကွန် Cut နှင့်နက်ရှိုင်းသောဒယ်အိုးထဲမှာကြော်။ ကြက်သွန်, မှိုနှင့်ဘေကွန်နှင့်အတူထု shinkuem passeruem ။ အရောအနှောကိုအေးမြစေသူကထုကုန်တယ်သံလွင်ကွင်း၌ထားလေ၏။ , အသား-based ကိုယူကပေါ် stuffing ပျံ့နှံ့နှင့်ဝက်သားလိပ်လှည့်။ အားလုံးသွားကြားထိုးတံ Secure, ကြက်ဥရိုက်နှက် breadcrumbs နှင့်ထဲမှာလှိမ့် lubricates ။ ထောပတ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီဘက်မှာ6မိနစ်ကြော်ဝက်သားအသားလက်ချောင်းများ။ ထိုအခါမှသာ 170 ° C တို့မှာကိုင်ပြီး, 15 မိနစ်ဖုတ်ပန်းကန်ထဲမှာကသူတို့ကိုပြောင်းလဲကာမီးဖိုတဖို၌ဖုတ် အသုံးမပြုမီ, ဂရုတစိုက်သွားကြားထိုးတံကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်စားပွဲပေါ်တွင်သင်၏လက်ချောင်းဝတ်ပြုကြလော့။
ပျော့ဖတ်ဝက်သား - 800 ဂရမ်;
တံစဉ်များကိုချွတ်ချွတ် - 150 ဂရမ်;
ရေ - 500 ml ကို။
ယင်းဝက်သားအသားနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပါးလွှာချပ်သို့ဆေးကြောခြင်းနှင့်ဖြတ်သည်။ ထို့နောက်တစ်ဦးပလတ်စတစ်အိတ်၌ထားတော်မူ၏, ကောင်းစွာတွေ့တဲ့အခါ။ ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီအချပ်အချို့ဆား, အရသာနှင့်ခြမ်းမှဖယ်ရှားပစ်ရန်ငရုတ်ကောင်းထည့်ပါ။ တံစဉ်များကိုအားဖြင့် iterate ကိုလျှော်, 15 မိနစ်ရေပူစိမ်မျိုးစေ့များနှင့်အခြောက်လှန်းအသီးအပွဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ဝက်သားအသီးအသီးအပိုင်းအစအပေါ်အချိန်ကျမ်းပိုဒ်အနည်းငယ်သီးထွက် တင်. ညင်ညင်သာသာလိပ်, သွားကြားထိုးတံအစွန်း Bond ဒါမှမဟုတ်အချက်အပြုတ်ချည်ကိုပြုပြင်တာတွေအတွက်အသားချပ်ရွှေ့ပြောင်း။ ယခုရေနံဒယ်အိုးထဲမှာလောင်းကအပူ။ အဆိုပါပြင်ဆင်ထား preform ပြန့်နှံ့နှင့်လှပသောအညိုရောင်သည်အထိအသီးအသီးအခြမ်းမှာသူတို့ကိုကြော်။ ထိုနောက်မှငါတို့သည်အ skillet လက်ချောင်းများမှပြောင်းရွှေ့။ စင်ကြယ်သောကြက်သွန်, shinkuem ကွင်းကျန်ရှိနေသောရေနံနှင့်အမဲသားကြော်ကိုထည့်သွင်းဖို့ passeruem ။ ရေသူအပေါင်းတို့ကိုသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုဖြည့်ပါ, အလတ်စားအပူကျော်နှင့်ပတ်သက်ပြီး 15 မိနစ်များအတွက်ပင်လယ်အော်အရွက်များနှင့်ဝက်သားများမျှတည်ထားပါလက်ချောင်းများပစ်။
ပျော့ဖတ်ဝက်သား - 500 ဂရမ်;
ခက်ဒိန်ခဲ - 100 ဂရမ်;
ကြက်သွန်ဖြူ - 1 လေးညှင်းပွင့;
Mayonnaise - 200 ml ကို;
ကြက်သားကြက်ဥ -3PCs; ။
မုန့်ညက် -2tbsp ။ ဇွန်း,
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ - ကြော်ပါ။
ဝက်သားခုတ်လက်ဆေး, သုတ်နှင့် ပတ်သက်. 1 စင်တီမီတာတစ်ဦးအထူရှိခြင်းပါးလွှာချပ်သို့ခုတ်ဖြတ်။ ထိုအခါအသားအရသာအတွက်ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူပွတ်တိုက်ပြန်စစ်တိုက်ခြင်းငှါကောင်းစွာဖြစ်ပါတယ်။ အလတ်စား grater တွင်, သန့်နှင့်ညှစ်ကြက်သွန်ဖြူနှင့်အတူကမွှေ, ဒိန်ခဲဖျက်စီး Mayonnaise အပေါင်းတို့နှင့်ရောမွှေပါ။ အဆိုပါတုံးပေါ်ချက်ပြုတ် stuffing ထားပါနှင့်အသားလိပ်ကိုဖွင့်, တစ်သွားကြားထိုးတံနှင့်အတူဤဒေသလုံခြုံ။ အဲဒီနောကျလက်ချောင်းတစ်အပေါ်ယံလွှာကိုဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ဒယ်အိုးထဲမှာဆီပမာဏကြီးမားတဲ့အတွက်ထို့နောက်ရိုက်နှက်ကြက်ဥနှင့်ကြော်အတွက်မုန့်ညက်အတွက်ပထမဦးဆုံးနှစ်ပြီးသော။
Daikon - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ကြက်ဥနှင့်အတူ minced အသား zrazy ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Mango နှင့်အတူသုပ် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
သလဲသီးနှင့် walnut နှင့်အတူသုပ်
Mascarpone နှင့်အတူ tiramisu အဘို့အကြော်
လျင်မြန်စွာပိုက်ဆံစုပြုံ9ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ
ရေမွှေး Britney Spirc
ကောင်လေးကအဘို့အကြှနျုပျ၏မိခငျ၏ဘဏ္ဍာကို - ခြေလှမ်းမာစတာအတန်းအစားကခြေလှမ်း
Ambrosia - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
ဇနီးဂျေမီ Dornan ကိုယ်ဝန်ကောလာဟလဖြစ်စေခဲ့သည်